Xagguu ku dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar Ilay? - Worldnews.com
Xagguu ku dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar Ilay?
Xagge ku dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar?
Wararka BBC-da ay helayso ayaa sheegaya in madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya ee xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar uu weli ku sugan yahay magaalada Addis ababa.
Warar is khilaafsan ayaa sheegaya in Cabdi Maxamuud uu xiran yahay,
Madaxweynihii DDSI Cabdi Ilay oo la qabtay+Halka la geeyay
Cabdi Maxamuud Cumar oo la qabtay Wararka inaga soo gaaraya dalka Itoobiya waxay sheegayaan in madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dowlad deegaanka soomaalida ee...
Qaran News 2018-08-07
Cabdi Maxamuud Cumar iyo dad kale oo maxkamad lasoo taagay
Maxkamadda Sare ee Itoobiya ayaa waxaa la horkeenay Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo afar mas'uul kale oo maamulkiisa horey uga...
BBC News 2018-08-29
Taleefishinka Itoobiya oo baahiyay Cabdi Maxamuud Cumar oo la xirayo
Guri uu ka deganaa magaalada Addis Ababa meel u dhow Hotel Atlas ayay ciidamada federaalka ka kaxeeyeen Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka, kaas...
Dawlada Itoobiya oo Jeelka dhigtay Cabdi Ilay goor-dhaweyd
Cabdi Maxamuud Cumar oo xabsiga loo taxaabay Xafiiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya...
Qaran News 2018-08-27
Jigjiga: Militeriga Itoobiya oo kaxeystay Cabdi Maxamuud Cumar
Madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa lagu soo waramayaa in ciidammada militariga federaalka ay u...
Garyaqaan ka warramaya in Cabdi Maxamuud Cumar loo fidin karo cafis iyo in kale
Madaxweynihii hore ee Dawlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, oo shalay markii saddexaad maxkamad lagu soo taagay magaalada Addis Ababa ayaa...
BBC News 2018-09-29
Jigjigiyo Jubbaland Jowxoy Calanka Sura Maamoyin Qiireysan HD
Saraakiisha Ciidanka Daraawiishta Jubbaland oo ka warbixyay xaaladda Ammaan ee deegnada Waqooyi
Madaxweynaha Jubbaland oo kormeeray furimaha dagaalka1
Cidaamada Daraawiishta Jubbaland qaybtooda Afmadow oo oo bilaabey howlgallo ballaaran 1
Axmed Madoobe oo arrin yaab leh usoo bandhigay Xildhibaannada Jubbaland#
Wasaaradda warfaafinta Jubbaland oo Kismaayo ku Qabatay kulan looga hadlaayey Faa’iidda Kulluunka
Afduubka Axmed Madoobe ee Jubbaland, iyo Kacdoonka Gedo | Suldaan Cabdicasiis Afguduud
Soo dhaweyntii Qalbi Dhagax iyo Jubbaland
Warka Saacadda Jubbaland TV 1:00 PM 12-October-2018
Madaxweynihii hore ee Dawlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, oo shalay markii saddexaad maxkamad lagu soo taagay magaalada Addis Ababa ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ka codsaday inuu cafis u fidiyo isaga iyo dadka la eedaysanba. Cabdi Maxamuud ayaa sheegay in muddo 12 sano ah uu dalkiisa u soo shaqeynayay, haatanna uu mudan yahay in...
Abiy Axmed "Arrinta Cabdi Maxamuud Cumar waxay u taalla sharciga Itoobiya"
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed oo xalay kulan la qaatay saxaafadda maxaliga ee waddanka Itoobiya ayaa ka warbixiyay arrimo dhowr ah oo imika ka tagaan dalka Itoobiya. Abiy Axmed wuxuu sheegay in hubka laga dhigi doono ururrada dhawaan gogosha nabadeed ay dowladda Itoobiya u fidisay islamarkaasna laan u qaabilsan arrintaasi la yagleeli doono. Wuxuuna ugu baaqay...
Cabdi Maxamuud Cumar oo weli majaraha u haya dowlad deegaanka
Shalay waxaa xilka madaxweynenimada dowlad deegaanka Itoobiya iska casilay Cabdi Maxamuud Cumar oo xilkaas soo hayay 8deedii sano ee lasoo dhaafay, haddaba halkee ayuu ku dambeeyaa Cabdi?. Ninka badalay Cabdi oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Maxamed oo BBC-da la hadlay ayaan weeydiinay su'aashaasi, wuxuuna sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar uu weli majaraha u hayo siyaasadda dowlad...
JIGJIGA - Madaxwaynihii DDSI, Cabdi Maxamed Cumar ayaa la xaqiijiyay inay gacanta ku dhigtay dowladda Federaalka Itoobiya oo xiriirka kala dhaxeeyay uu xumaa mudooyinkii dambe, inkastoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan qaabka loo qabtay. Odayaasha Dhaqanka ee ku sugan magaalada Jigjiga ayaa daboolka ka qaadaya in Cabdi Illey ay ciidamada Milatariga Itoobiya ay jirdil iyo...
JIGJIGA - Diyaarado dagaal ayaa lagu arkay maanta hawada magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaaliya Itoobiya, xilli dhawaan halkaasi ay la wareegeen ciidamada Federaalka dalkaasi. Dadka degaanka ayaa u sheegay warsidaha Garowe Online in diyaaradaha oo gaarayay illaa labo ay hal jeer dul-mareen guud, iyadoo aan la ogayn ujeedka dambeysay arrinkaas, laakiin wararka...
Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa ka warbixiyey hawlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al shabaab iyo
Jubaland TV waa isku xiraha bulshada Soomaaliyeed waxayna kuu so gudbineysaa warar iyo barnaamijyo xiiso badan. Ku xirnow mar walba....
gobolka gedo, siiba garbahareey, baardheere, buurdhuubo waxaa ka socda kacdoon logasoo horjeedo axmed madoobe, tvga calamiga ee somalii cble ayaa wareystay suldaan cabdicasiis ASXBTA. LIKE KUQABO, SHARE DHEH, MAHADSANIDIN...
Jubaland TV waa isku xiraha bulshada Soomaaliyeed waxayna kuu so gudbineysaa warar iyo barnaamijyo xiiso badan. Ku xirnow mar walba.
gobolka gedo, siiba garbahareey, baardheere, buurdhuubo waxaa ka socda kacdoon logasoo horjeedo axmed madoobe, tvga calamiga ee somalii cble ayaa wareystay suldaan cabdicasiis ASXBTA. LIKE KUQABO, SHARE DHEH, MAHADSANIDIN